downloads 35 598
Nlere nke Hiroshi Igami (TDS). Reworked 2D Panels na VC nke Philippe Marion dere. Ihe ngwugwu CFM LEAP sitere na k-akai.blogspot.com. Ihe ngwugwu nke Rikoooo mepụtara
Emelitere na 27 / 02 / 2020: 1.03.dị XNUMX - Nke a na-eweta ọtụtụ ndozi.
Eletriki na-agbanye ọkụ -> nwere ike iji Ọnọdụ Cold na ọchịchịrị ugbu a
Injin na-enwu ọkụ na Prerpar3D V4.5
2D ogwe ogwe windo
PFD XML faịlụ nke na-agbazi ntọala Barometer (nke JackyB)
Ntọala redio site n'aka onye na-arụ ọrụ zuru oke nke nwere ụda
Abalị ịrahụ n'anya na-eme n'abalị karịa site n'aka ndị ka dị adị
Virtual cockpit light utịp (fx_vclight) maka ịdị adị kacha mma
E jirila ụdị ọchịchịrị kacha mma ka mma dochie ya
Mịpị bọtịnụ akara ngosi na kobere
Icon maka ịba uru na oriọna ọkụ na kọlụm kwalitere na 2D Panel
Na-enyocha nkwalite ọkụ ọkụ nke onwe ya na akpukpo oku
Emelitere na 24 / 02 / 2020: Xdị 1.02
Otutu otutu ihe emezi na Faịlụ ikuku na aru
Center nke ike ndọda
Ibu ọsọ nke 737-MAX8 n'ime simulator
Ọkụ na injin ndị ahụ agaghị ekwe omume ịkwụsị
Atọ ụzụ nke gyros na VC.
Ahaziri nke ọma maka ọkụ Shockwave
The Boeing 737-MAX8 afiak na Rikoooo! You dịla njikere iji efe ikuku a? Ọ bụ site na ikike nke onye okike Hiroshi Igami (TDS) ka anyị na-enye ngwugwu a kachasị mma gụnyere 41 repaints. So na ndabara kobere nke FSX 737-800 (enweghị 3D 737-MAX free kopịpịpị oge a) Alejandro Rojas Lucena / FSND na Panel V2 mezuru site na Philippe Marion, ụda setịpụrụ maka CFM International LEAP-1B engine nke emere. k-akai.blogspot.com na ọtụtụ ndozi ndị ọzọ na-eme ngwugwu a kacha mma ngwa ngwungwu maka 737-MAX8. Akwụkwọ ntụziaka zuru ezu na akwụkwọ gụnyere.
Boeing 737 Max bụ ọgbọ nke anọ na ezinụlọ nke ụgbọ elu nke 737 nke Boeing Commercial Airplanes wuru, dabere na usoro ntụgharị nke 737 nke ọ ga-anọchi. Ngbanwe kachasị bụ ntinye nke injin CFM International LEAP-1B buru ibu ma dịkwuo arụmọrụ. Ndị ọzọ na-eche maka ikuku ikuku na njikwa ụgbọ elu. Flightgbọ elu nke 737 Max mere na Eprel 13, 2017, afọ 50 mgbe ụgbọ elu mbụ nke 737. Ka ọ na-erule Ọktoba afọ 2014, Boeing anatala ngụkọta nke iwu siri ike 2,326 maka 737 MAX. Maka ihe ọrụ aka nke injin ndị ahụ, Boeing akwụsịla njem ụgbọ elu ya, ọbụladị na-atụ anya igbu oge. Agbanyeghị, na Mee 16, 2017, o nyefere ndị mbụ nọ n'ụkpụrụ ụgbọ elu Malayindo Malindo Air, na-egbu oge otu ụbọchị ma e jiri ya tụnyere usoro mbido. Isi mmalite Wikipedia.
VC bu ihe nleba anya nke Boeing 737-800 VC nke Alejandro Rojas Lucena / FSND. Ihe nlere VC a gụnyere igwe nhicha ọrụ (aka nri pịa pịa) Ntughari maka nyocha LCD, EICAS, PFD, MFD. Nchekwa onwe-breeki. Emepe windo ụgbọ elu. Ìhè na-enye ụlọ ọkụ. Ejiri ezigbo FMC jikwaa.
Realisticdị ederede VC dị adị n’ehihie na abalị, ya na nwelite ndị ọzọ Philippe Marion, tinyere nlele igwefoto VC 5, gbakwunye Autopilot (hiwere isi) na ndoro-ndoro, na onye isi ọrụ mbụ, console Center na N'ofe. Egosiputara oghere XML Redio ohuru na VC iji dochie igwe onyonyo FS9 B737-400 ochie.
Onwe-aka na aru oru, Auto-taxi na aru oru, igwe Autopilot annunciator pan, nchedo okwu ngbasa ozi / nkenke akuko, oghaghari flaps na agbatị annonoator, Anti-skid., VSpeed, Altitude Callout. Rụ ala na ntinye ọkụ (jiri Utility obubọk), akara mkpụbelata (atrim.cab)
Edere aha ihe ndozigharị ya na ndi okike
Agba Boeing House: Carlos Eduardo Salas
AeroMexico: Emmanuel Duarte (C&E chepụtara)
Ikuku Canada: Carlos Eduardo Salas
Ikuku China: Alex Williams
Ikuku Ikuku: Pascal Disch
Ikuku Jamaica: Alejandro Magadan
Amercian ụgbọ elu: Stian Svensen
Airgbọ elu British: Stefan Bree
Batik Batik: Torsten Märtke
Condor "Obi Anyanwụ": Pascal Disch
Copa ụgbọ elu: Alejandro Magadan
Corendon ụgbọ elu: Stefan Bree
Airlinesgbọ elu Eastern: Alejandro Magadan
Iberia ụgbọ elu: Alejandro Magadan
Linegbọ elu ụgbọelu KLM Royal Dutch: Sean Kneppers
OTgbọ elu ụgbọ mmiri Polish: Stefan Bree
Ndi Norwegian: Stian Svensen
Wayszọ ụgbọ elu dị mma: Stefan Bree
Atgbọ elu Scat: Torsten Märtke
SOUTHWEST Agba ọhụrụ: Steve McBee
Ndị ụgbọ elu Turkish: Steve McBee
United ụgbọ elu: Carlos Eduardo Salas
Airlinesgbọ njem TUI: Christoph Plank
Hainan ụgbọ elu: Lingyuan He
Shanghai ụgbọ elu: Lingyuan He
Airlinesgbọ elu Siberian (S7): Gus Rodriguez
Site na ndabara, nlele nha idozi ọkụ dị, nke na-eme mkpụmkpụ mfe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpa ezi agwa karịa, ị nwere ike wepu ma ọ bụ weghachite nlele ahụ atrim.cab nke di n’ime folda “panel.wide” (\_ SimObjects \_ plangbọ elu \_ Boeing 737-MAX8 Multi-Livery \_ panel.wide)
Ugbu a tupu ebugharị: Mee elu gị site na + 2 ° ruo + 4 Celsius ma ọ bụghị na ị gaghị enwe ike iweghara, gbakwunye obere 5 Celsius nke flaps. Bugharia ihe ruru otu nkiti 140 rue olulu mmiri 12-15.
Ulo dị mkpụmkpụ chọrọ karịa flaps karịa, kacha 15 Celsius.
Gosiputa ogwugwu Utility
Prepar3D FSX - FSX-ADE
Ogwe njikwa ọkụ
Ground Utility Utility Panel 1
Ground Utility Utility Panel 2
Ogwe maka Push-Back na Dijitalụ GSU
Onye edemede: Nlere nke Hiroshi Igami (TDS). Reworked 2D Panels na VC nke Philippe Marion dere. Ihe ngwugwu CFM LEAP sitere na k-akai.blogspot.com. Ihe ngwugwu nke Rikoooo mepụtara